QUICKLIME waxaa laga soosaaraa nuuradda oo ka kooban isku dar ah kalsiyum iyo magnesium carbonates labadaba. Labada kalsiyum ee dheereeya iyo dolomitic quicklime waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu kululeynayo dhigaalka nuuradda ceeriin ee ceelka ceelka ku jira ilaa heerkulka 900 darajo. Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'calcination process'. T ...
Sharaxaadda Badeecada Foornada liinta ee toosan waxaa loola jeedaa aaladda kala-sooca lime si loogu sii daayo clinker-ka si joogto ah qaybta hoose ee quudinta sare. Waxay ka kooban tahay jir foornada qotonta, ku darida iyo sii deynta qalabka iyo qalabka hawo-siinta. foornada lime ee toosan waxaa loo qaybin karaa f ...
Foornada liinta ee toosan waxaa loola jeedaa aaladda lime calcining si loogu sii daayo clinker si joogto ah qaybta hoose ee quudinta sare. Waxay ka kooban tahay jir foornada qotonta, ku darida iyo sii deynta qalabka iyo qalabka hawo-siinta. foornada lime ee toosan waxaa loo qaybin karaa afarta nooc ee soo socda ...
Dhibaatooyinka ay tahay in laga fogaado soosaarka kilkilaha lime u dhow deegaanka
1) Cabbirka nuuradda waa mid aad u ballaaran: xawaaraha kalinta ee nuuradda waxay kuxirantahay heerkulka uu leegyahay cabirka walxaha xiriirka lime ee dusha sare ee nuuradda. Heerkul gaar ah, heerka kalsiinta nuuradda waxay kuxirantahay cabirka nuuradda.
Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka,